Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no nanambara ny talata lasa teo fa ho tonga eto Madagasikara ny alakamisy 5 novambra 2020 ny "Satro-boninahitry ny tatarom-piandrianan'ny Mpanjakavavy Ranavalona", 123 taona aty aorian’ny nakan’ny mpanjanaka azy. Raha tsy misy ny fiovana amin’ny ora farany dia amin'ny 8 ora sy sasany maraina no figadonan'ny fiaramanidina eny Ivato hitondra io vakoka io.
Mivelatra sy mivoatra hatrany. Nampahafantarina sy notokanana androany ny ITU Design School, rantsana iray eo anivon’ny IT University, manana ny foiben-toerany etsy Andoharanofotsy. Hamaly ny filana eo amin’ny lafiny serasera, dokambarotra, tonta printy ny fisokafan’ity lalampiofanana « design » ao amin’ny IT University ity. Sehatr’asa mivelatra ary mbola malalaka rahateo ireo eto Madagasikara, saingy mitaky fahaizana manaraka ny fivoaran’ny teknôlôjia.
Vita ny asa fanarenana ny lapan'i Manjakamiadana sy ny lapan'ny Besakana. Hotokanana amin'ny 6 Novambra 2020, 25 taona taorian'ny nahamay ny tao Anatirova, araka ny nambaran’ny filoha Andry Rajoelina androany tao amin'ny Lapam-panjakana Ambohitsirohitra. Ho tonga eto Madagasikara amin'ny Alakamisy 05 Novambra 2020 ny satroboninahitry ny Mpanjakavavy Ranavalona III, rehefa nentin’ny mpanjanaka 123 taona lasa izay, ary naranty tao amin’ny Mozean’ny Tafika frantsay ao Paris.
Hifarana anio talata ny fankalazana ny fomban-drazana Feraomby, izay fanao isaky ny roa taona aty Anororo Amparafaravola. Fotoana fangataham-pitahiana mba hambinina amin’izay atao, araka ny fomban-tany mahazatra, ny Feraomby ho an’ireo mponina ao amin’io kaominina ambanivohitra iray any ampitandrefan’Alaotra io. Fomba atao hamataran-taona na tsara na ratsy ihany koa ny Feraomby.Anisan’ny fomba iray entina mankalaza ny Feraomby ny fanaovana festival manerana ny tanàna mandritra ny herinandro, ankoatra ny fanatanterahana ny fomba mahazatra. Nafohezina araka izay azo atao ny fotoana nanaovana azy tamin’ity taona ity noho ny antony ara-pahasalamana.Noferana ho roa andro ihany ny fotoam-pankalazana tamin’ity indray mitoraka ity.
mardi, 03 novembre 2020 08:06
Dadah (Mahaleo) : Herintaona lasa izay …
3 novambra 2019 - 3 novambra 2020. Mitsingerina anio ny nahafatesan’i Andrianabela Rakotobe, izay fantatry ny maro amin’ny anarana maha mpanakanto azy hoe : Dadah. Nindaosin’ny fahafatesana tampoka ny alahady 3 novambra 2019 tao Antsirabe izy. Isan’ireo fito lahy mpikambana mpamorona ny tarika Mahaleo i Dadah. Mpamoron-kira, mpitendry gitara sady mpihira izy. Manana tarika azy manokana ihany koa izy, Dadah Rabel, ary nampiara-peo tamina mpanakanto maro, indrindra ny tanora.
mercredi, 28 octobre 2020 15:17
Fampisehoana an-tsehatra : Sahirana ireo mpandrahara manafatra mpanakanto
Mbola manankery ve ilay fepetra noraisin’ny fanjakana tamin’ny volana septambra 2020 fa azo atao ny manao fampisehoana ao anatin’ny fanajana ny fepetra, ary nilazana fa hojerena ny hanalefahana, na mety hanafoanana mihitsy aza, ny hetra aloan’ny artista any amin’ny Kaominina ? Nambara tamin’izany ihany koa fa homena maimaimpoana ireo mpanakanto te hanao fampisehoana ny Coliseum Antsonjombe. Ny zava-misy dia fatiantoka tsy roa aman-tany ny an’ny mpikarakara fampisehoana, nikasa hampiakatra an-tsehatra an’i Bolo Pixx sy Jean Aimé tao Ambatomainty andaniny, sy ankilany i Jean Aimé sy Mijah tao Manakambahiny, Distrika Ambatondrazaka.
Misy izany te ho katolika alohan'ny Papa, izy indray no be fanazavana momba ny resaka katolika sy Papa, ka governemanta katolika hoy izy ireo, taiza koa ny katolika no hanana governemanta izany. Mety maheno hoe ministre fiantsoana ny pretra lehiben'ny congregation sasany dia heverina fa minisitra anaty governemanta. Rehefa tsy hay le raha aleo ny tena katolika no iresaka azy. Amin'ny manaraka isika, miresaka momba iny resaka fanambadian'ny mitovy fananahana iny, ny azo ambara hatreto dia ny Papa tsy miresaka sy maneho hevitra raha tsy misy ny hevitra vita an-tsoratra, io no antsoina hoe Encyclique, io Encyclique io dia taratasy alefan'i Papa ho an'ireo Eveka rehetra ho fampahafantarana ny hevitry ny Fiangonana momba loha-hevitra iray, misy amin'io Encyclique io ihany koa no ampitaina amin'ny Kristianina rehetra, ka miandry izay voasoratra izay aloha isika fa tsy mi com resaka an-gazety izay samy manana ny androhitany azy.
mardi, 20 octobre 2020 21:18
Asa fanaovan-gazety : Nodimandry Razafitrimo Léon na Léo Raz
Nindaosin’ny fahafahatesana androany maraina, ny Mpanao gazety mpanao famakafakana Razafitrimo Léon, fantatra amin’ny solon’anarana Léo Raz. Talen’ny famoahana eo anivon’ny vondrona Ultima Media, misy ny gazety Taratra, Les Nouvelles, Bôjy ary Alliance 92 izy. Efa talen’ny famoahana ny gazety Le Courrier de Madagascar, Le Journal de Madagascar ary ny Madagascar Matin ihany koa Razafitrimo Léon. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 20 octobre 2020 12:41
Fafah Mahaleo : Herintaona lasa izay no nandaozany ny tany
20 oktobra 2019 - 20 oktobra 2020, herintaona katroka androany no nindaosin’ny fahafatesana i Fafah. Rajaonarison Famantanantsoa Andriamihaingo no tena anarany. Fafah no anarana fiantso azy, sady anarana maha mpanakanto, sy tena nahafantarana azy. Mpiasam-panjakana izy fahavelony. Iray tamin’ireo mpikambana mpamorona ny tarika Mahaleo i Fafah.Ny feony izay avo no isany tena nampiavaka azy.Nampiara-peo tamina mpanakanto sy tarika maromaro ihany koa izy fahavelony.